कोरोनाका कारण प्रिमियर लिग रद्द... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
कोरोनाका कारण प्रिमियर लिग रद्द भए लिभरपुलले उपाधि जित्ला?
विश्वभर फैलिरहेको कोरोनाभाइरसको संक्रमणको खतराका कारण विश्वका खेलकुद प्रतिस्पर्धा मारमा परेका छन्। कतिपय खेलकुद प्रतियोगिता रद्द भएका छन् भने कतिपय प्रतियोगिता स्थगित गरिएका छन्।
विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय फुटबल लिग इंग्लिस प्रिमियर लिगका खेल पनि स्थगित भएका छन्। २९औं चरणको खेल जारी रहदा लिगका खेल अप्रिल ४ सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
लिगमा शीर्ष स्थानको लिभरपुलको २९ खेलबाट ८२ अंक छ। दोस्रो स्थानको म्यानचेस्टर सिटीभन्दा २५ अंकले अघि रहेको लिभरपुल ३० वर्षपछि पहिलो पटक लिग जित्ने संघारमा छ। तर कोरोनाले लिग नै रद्द भएको अवस्थामा लिभरपुलले उपाधि जित्छ वा जित्दैन भन्नेमा प्रश्न उठेको छ।
अप्रिल ४ बाट लिगका खेल नियमित रुपमा भएमा लिभपुललाई उपाधि जित्नलाई कुनै बाधा हुनेछैन। किनकी अर्को सिजन प्रभावित नहुने अवस्थामा लिग सुचारु भए लिभरपुलले ९ खेलबाट ६ अंक जोडे उपाधि जित्नेछ।
तर कोरोनाका कारण लिग नै रद्द भएमा लिगको उपाधि के हुन्छ?
प्रिमियर लिगको नियममा लिग रद्द नै भए के उपाधि के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन। यद्यपी लिगको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रिमियर लिगको बैठकमा छ।
बैठकमा दुई तिहाई मतको आधारमा निर्णय हुनेछ। यसको अर्थ २० मध्ये १४ क्लबले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। लिग रद्द भएको अवस्थामा अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको लिभरपुलले उपाधि जित्नका लागि कम्तिमा १४ क्लबले उसको समर्थन गर्नु पर्ने देखिएको छ।
लिगको उपाधिको विषयमा विभिन्न क्लबका पदाधिकारीहरुको धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। वेस्ट ह्यामकी उपाध्यक्ष करेन ब्राडीले लिग पूर्ण नभएको अवस्थामा रद्द गर्नु पर्ने भन्दै 'द सन' पत्रिकामा लेख लेखेकी छिन्।
लिभरपुललाई उपाधि दिलाएको अवस्थामा ३ वटा क्लब रेलिगेशन पर्ने वा नपर्ने विषयमा पनि निर्णय हुनेछ। यस्तै च्याम्पियनसिपबाट प्रिमियर लिगमा उक्लने ३ क्लबले पनि दाबी गर्न सक्नेछन्।
एक टिम प्लेअफबाट प्रिमियर लिगमा उक्लने अवस्थामा च्याम्पियनसिपका शीर्ष २ क्लब अहिले प्रिमियर लिग उक्लने दाबीमा छन्। यो अवस्थामा अर्को सिजनमा २२ क्लब पहिलो डिभिजनमा हुने अवस्था आउनेछ। जसका कारण लिगको समग्र प्रणालीलाई नै असर गर्न देखिन्छ।
लिगको प्रणाली नै असर गर्ने अवस्था लिभरपुललाई मात्र उपाधि दिने निर्णय गर्न कठिन हुने देखिन्छ। जुन कठिन निर्णय आगामी बिहीबार हुन सक्नेछ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, चैत २, २०७६, १३:४७:००
मेसी आफ्नो ७० प्रतिशत तलब कटौती गर्न सहमत
विश्व खेलकुद ठप्प भइरहेको बेला दर्शक राखेर फुटबल लिग संचालन
'प्रिमियर लिगको उपाधि लिभरपुललाई दिनु न्यायसंगत'
सिजनको फुटबल लिग पूर्ण नतिजा नआइ अन्त्य हुन सक्ने
युभेन्ट्सका खेलाडीको चार महिनाको तलब कटौती हुने